हिटरका कारण कसरी हुन्छ मान्छेको मृत्यु ? (भिडियोसहित) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
हिटरका कारण कसरी हुन्छ मान्छेको मृत्यु ? (भिडियोसहित)
access_time२०७६ साल माघ १० गते, शुक्रबार ०२:३९ PM chat_bubble_outline Comments folder_open विचार भिडियो
गत सोमबार मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित दामनको एउटा होटलमा आठजना भारतीय नागरिकको हिटरको कारण मृत्यु भएको खबर सञ्चार माध्यमहरुमा छ्यापछ्याप्ती भयो । समाचारहरुमा विद्युतीय हिटरको फोटो राखेर समाचार आएका थिए ।
तर, कुन हिटरको कस्तो असर हुन्छ ? हिटरका कारण कसरी मानिसको मृत्यु भयो ? आदि विषयमा भने चित्त बुझ्दो कुनै समाचारमा देखिनँ ।
ग्यास र कोइलाको आगोभन्दा विद्युतीय हिटरहरु सुरक्षित हुन्छन् । विद्युतीय हिटरमा भएका रडहरु तातो भएर ताप प्रदान गर्दछ । तर, ग्यास हिटर र कोइला बल्न अक्सिजन आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि उपलब्ध वातावरणबाट अक्सिजन लिन्छ । बन्द कोठामा ग्यास हिटर र कोइला बल्न थालेपछि कोठामा अक्सिजन घट्दै जान्छ । हिटर र मान्छे दुवैले अक्सिजन लिने हुनाले कोठमा अक्सिजन कम हुन्छ । जसले त्यहाँ रहेका मानिसलाई असर गर्दछ ।
मानिसले रातो रक्तकोषमा रहेको हेमोग्लोबिनमार्फत अक्सिजन लिन्छौं । बन्द कोठामा ग्यास हिटर र कोइला बाले त्यहाँ अक्सिजन कम र कार्बोमनोअक्साइड बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थमा हेमोग्लोबिनले अक्सिजनभन्दा कार्बोमनोअक्साइड लिन्छ । र, कार्बोअक्सी हेमोग्लोबिन बन्छ । जुन स्थिर हुन्छ ।
कार्बोअक्सी हेमोग्लोबिनका कारण शरीरका अन्य कोषहरुको सञ्चालनमा समस्या सिर्जना हुन्छ । यसले शरीरमा ऊर्जा प्रवाह हुन पाउँदैन । हेमोग्लोबिन शरीरका सबै ठाउँमा सञ्चार हुन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा स्वास प्रस्वासमा समस्या हुन्छ । जसका कारण मान्छेको मृत्यु हुन्छ ।
त्यसैले ग्यास हिटर वा कोइला बाल्दा झ्याल ढोका खुला राख्नु पर्दछ । राति सुत्दा हिटर बन्द गर्नु पर्दछ ।
(गुरुङ कक्षा १२ का विद्यार्थी हुन् ।)
मसाल महामन्त्रीको एकल फोरमले निम्त्याएको संकट
नेपालजस्ता छिमेकीसँग पनि विवाद छ,भारतले सीमा विवादमार्फत आफैँलाई चोट पुर्याउँदैछ : चीन
खाद्यान्न समस्या समाधानमा विश्वको विचार 'हल्ट प्रतिस्पर्धा'
नेकपा (मसाल)मा विवाद : भ्रम र वास्तविकता
कहालीलाग्ने त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै उज्यालो युग सुरुवात गरेँ : कुलमान घिसिङ